नोभेम्बर 10, 2018 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
रक्सीको लत छोड्न ज्वानो ! यदि तपाईं रक्सी छोड्न चाहनुहुन्छ भने आजैदेखि थोरै ज्वानो मुखमा राख्न थाल्नुहोस तपाईंको मनकामना यसले पुराउने छ । रक्सी सेवन गर्नेहरुलाई मेरो प्रश्न ? आजसम्म कसैले तपाईंलाई स्वासी दिएको छ । या भनौं कसैले मेडल दिएको छ ।
रक्सी सेवन गर्नेहरुले निम्न प्रकारको उपाधी भने पाएका छन् । जडेया, आवारा सम्पत्ति धेरै भएको आदि नामले सुसुभित भएको पाएको छु । आनन्द दिने बस्तुभित्र पर्दो रहेछ यसले लडाउन, दुर्घटना गराउन, बलात्कार सघाउन, भ्रष्टाचार गराउन, फजुल खर्च गराउन राम्रो भुमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
अब ज्वानो कसरी सेवन गर्ने त ?
बिहान उठ्ने वित्तिकै खानापछि थोरै ज्वानो मुखमा राखेर चुस्न दिनुहोस रक्सीको लतलाई हटाउन मदत्त गर्दछ ।
← भान्साको औषधि ज्वानो र यसको उपयोग
धर्मको रक्षा गर्नु सबैको नैतिक दायित्व →
डिसेम्बर 6, 2018 डिसेम्बर 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
जनवरी 31, 2019 जनवरी 31, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
5 thoughts on “रक्सीको लत छोड्न ज्वानो”
Pingback:होशियार ! जान्नुहोस् यस्तो छ रक्सीबाट स्वास्थ्यमा हुने क्षति
Pingback:विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन्
Pingback:थाहा छ तपाईलाई यसकारण रक्सी पिएपछि मानिसलाई मात लाग्ने गर्छ
Pingback:चुरोट कसरी छोड्ने होला भनेर सोचिरहनु छ ? अव चिन्ता नगर्नुहोस्